Wiil Hargeysa Ka Tahriibay Oo Internet-ka La Soo Geliyey Isagoo Ay Garaacayaan Magafeyaal Uu Gacanta Ugu Jiro & Hooyadii Oo Taageero Dhaqaale Codsatay | Berberatoday.com
Wiil Hargeysa Ka Tahriibay Oo Internet-ka La Soo Geliyey Isagoo Ay Garaacayaan Magafeyaal Uu Gacanta Ugu Jiro & Hooyadii Oo Taageero Dhaqaale Codsatay
Wiilkan oo Magaciisu yahay Nasrudiin Jamaal Cali wuxuu ku jiray Fasalka labaad ee Dugsiga Sare ee Ilays ee Magaalada Hargeysa
Hargeysa(Berberatoday.com)-Hooyo Nimco Aadan Cabdillaahi oo ah Hooyada Dhashay Wiil Hargeysa ka Tahriibay isla-markaana Internet-ka la soo dhigay isagoo ay Garacaayaan Magafeyaal Liibiyaan ah, ayaa ka warrantay Dareenkeeda iyo Xaaladda Wiilkeeda ee Xilligan.
Wiilkan Gacanta ugu jira Mageyaasha Dadka Tahriibiya oo Magaciisa la yidhaahdo Nasrudiin Jamaal Cali isla-markaana ah 18 Jir ka Tahriibay Xaafadda Gol-janno ee Magaalada Hargeysa, ayaa Baraha Bulshada ee Internet-ka la soo dhigay Muuqaal laga soo duubay isagoo la garaacayo, isla-markaana Ashahaadanaya.
Mageyaasha Gacanta ku haya Wiilkan, ayaa Waalidkiisa ka doonaya Lacag dhan 8 Kun iyo 7 boqol oo Dollar, taasi oo ay ku sheegeen inay tahay kharashkii ku baxay intii uu ku jiray Safarkii uu halkaa ku gaadhay.
Hooyo Nimco Aadan Cabdillaahi oo ah Hooyada dhashay Wiilkan, ayaa iyadoo Mooral xun waxay dareenkeeda iyo siday ugu dedaalayaan inay Lacagta Wiilkeeda loo haysto Diraan uga warrantay Telefiishanka HCTV oo Shalay Gurigeeda ku booqday.
Hooyo Nimco Aadan Cabdillaahi waxay sheegtay in Wiilkeedu uu Tahriibay isagoo dhigta Fasalka labaad ee Dugsiga sare ee Ilays ee Magaalada Hargeysa, “Wiilkaygu ilama soo hadal, Fiidiyowga Internet-ka lagu soo daadiyey mooyaane. Markii uu dhaafay Magefihii Shanta Kun ee Dollar (ka qaaday), ayuu kan kale Gacanta u galay, markaa labadaa Magafe ayaa sii kala iibsaday, oo kaa hore Shan kun buu ahaa, kanna wuxuu doonayaa 8 kun iyo 7 Boqol Dollar.” Ayay tidhi, waxayna intaa ku dartay inay wixii ka dambeeyay Muuqaalka Internet-ka lagu baahiyey uu la soo hadlay “Wuu ila soo hadlay, waxaanu igu yidhi, Hooyo Lacagtii waa la iga doonayaa, Magafihiina wuu i dilayaa, markaa waxaan doonayaa inaan Jagada iibiyo, laakiin Ayeydii baa tidhi Jagada Iibin mayno ee Dadka ayaynu la hadli oo Meel ayuun baa wax laga keeni.”
Hooyada dhashay Nasrudiin waxay Codsatay in Cid kasta oo Awooddaa ka soo taageerto Lacagta ay ku bedbaadinayso Wiilkeeda uu Haysto Magefuhu, “Waxaan doonayaa in Nin walba wixii uu heli karo in Ilmahaa yar bedbaadadiisa la iga soo caawiyo, Waayo? waxay ii qabteen Afar iyo Labaatan Saacadood (in Lacagta lagu bixiyo), intaana maan soo hadh-gelin oo illaa xalay waan socdaa.” Ayay tidhi, waxayna intaa ku dartay oo faahfaahisay haddii ay lacagta hesho halka ay u marinayso Magafaha, “Waxay yidhaahdeen Lacagta noogu shuba Lambar ay leedahay Xawaalad Muqdisho ah (ku taalla), isagaana yidhi Lambarkaa Lacagta u dira waan ka helayaaye, laakiin illaa aan Codka Inankayga Maqlo oo uu yidhaahdo ‘Hooyo waa Nasrudiin’ Lacagta ma direyno.”
Maaha Nasrudiin oo keliya Dhallinyarada Soomaalida ee Gacanta ugu jira Magafeyaasha ka Macaasha dhibaatada Tahriibayaasha, balse waxa Internet-ka dhex daadsan Muuqaallo laga duubay Dhallinyaro Soomaali ah oo iyagoo Gacmaha iyo Lugaha ka xidhan oo la garaacayo, Qoysaskoodana la waydiisanayo Lacago Madax-furasho ah.